मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्दै प्रधानमन्त्री देउवा, कसको भागमा कति मन्त्रालय परे ? — Imandarmedia.com
मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्दै प्रधानमन्त्री देउवा, कसको भागमा कति मन्त्रालय परे ?
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सत्ता गठबन्धनका नेताहरुसँग मन्त्रीहरूको नामावली छिटो दिन आग्रह गरेका छन् । सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको शुक्रबार बिहान बालुवाटारमा बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रीहरुको नाम छिटो दिन आग्रह गरेका हुन् ।
मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन ढिलाइ भइसकेको भन्दै देउवाले आ-आफ्नो पार्टीमा मन्त्रीहरूको नाम छिटो टुंग्याएर दिन आग्रह गरेको बैठकमा सहभागी राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दूर्गा पौडेलले जानकारी दिइन् ।
गत असार २९ गते प्रधानमन्त्री पदको शपथ ग्रहण गरेका देउवाले मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन नसक्दा अहिले चार मन्त्री र एक जना राज्यमन्त्रीले सरकार चलाइरहेका छन् । त्यस्तै राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक शुक्रबार बसेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार बिहान सवा ११ बजे सुरु भएको बैठक पौने ११ बजेसम्म बसेको स्रोतले जनायो ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, मुख्यसचिव शंकरदास बैरागी, प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा, रक्षा सचिव बोगेन्द्रराज शर्मा पौड्याललगायतको सहभागिता थियो ।
बैठकमा देशको शान्ति सुरक्षा, एमसीसीको विरोधमा भइरहेका विरोध प्रदर्शनबारे छलफल भएको स्रोतले जनायो । प्रधानसेनापति बनेपछि शर्मा पहिलो पटक सुरक्षा परिषद्को बैठकमा सहभागी भएका हुन् । उनले बिहीबारमात्र प्रधानसेनापतिको कार्यभार सम्हालेका थिए ।
यो पनि : डिएसपी उद्दब सिंह भाटले महिला बन्दीहरुमाथि अनैतिक काम गरे- नेकपा नेता आदर्श
बाजुराका डिएसपी उद्दब सिंह भाटले विप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेता कार्यकर्तालाई गिरफ्तार गरेर हिरासतमा लिँदा महिला बन्दिहरुमाथि अनैतिक काम गरेको आरोप लागेको छ । उनिमाथि नेकपाका केन्द्रीय सदस्य चुडामणी ओली ‘आदर्श’ले यस्तो आरोप लगाएका हुन् ।
अभियानका क्रममा बाजुरा पुगेका बेला थुप्रै नेताकार्यकर्ता सहित जेल परेका नेता आदर्शले आफुसँगै गिरफ्तार परेका महिला बन्दिहरुमाथि बाजुराका डिएसपी उद्दब सिंह भाट नेतृत्वको टीमले त्यस्तो अनैतिक र अमानवीय हर्कत गरेको आरोप लगाएका हुन् ।
नेता आदर्शले एउटा अनलाइन टेलिभिजनलाई अन्तर्वार्ता दिदै यस्तो कुराको खुलासा गरेका हुन् । उनलाई गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन गरेको आरोपमा कारवाही गर्नुको साटो ओली सरकारले झन् पुरुष्कृत गरेको आरोप लगाएका छन् ।
आदर्शले भनेका छन् “म जुनसुकै निकायमा जुनसुकै व्यक्तिका अगाडी भन्न सक्छु, भाट बलात्कारी हो । यसलाई कारवाही हुनुपर्छ ।” त्यस्तै डिएसपी भाटले ६० दिनसम्म आफुहरुलाई कपि कलम पनि नदिएको र ओकिलसँग समेत सम्पर्क गर्न नदिएको बताएका छन् ।
त्यस्तै डिएसपी भाटले ६० दिनसम्म राती ८ बजेदेखि बिहान ४ बजेसम्म आफ्ना साथीहरुलाई क्रमैसँग एक्ला एक्लै लिएर यातना दिएको समेत आदर्शले बताएका छन् । ६० जना साथीहरुलाई डिएसपी भाटले चरम यातना दिएको र २ जना साथीहरुको यातनाकै कारण अहिलेसम्म राम्ररी कान नसुन्ने र आँखा नदेख्ने समस्या आएको समेत बताएका छन् ।
आफ्ना कार्यकर्ताका हात खुट्टाका छाला निस्किने गरि यातना दिएकाले भाटका बिरुद्ध मानव अधिकार आयोगको समेत ध्यानाआकर्षण हुनुपर्ने बताएका छन् । त्यस्तै भाटले ३ वटा गोली र एउटा कटुवा पेस्तोल ल्याएर आफुहरुको भन्दै सार्बजनिक गरेर अहिलेको व्यवस्थाकै नयाँ काण्ड मच्चाएको समेत बताएका छन् ।
साँझ ७ बजेपछि सधै पेस्तोल देखाएर कैदीबन्दीहरुलाई धम्क्याएर भाटले आफुले चाहे अनुसारको व्यबहार गर्ने गरेको भन्दै यस्ता क्रुर प्रहरी अधिकृतलाई राज्यले संरक्षण गर्ने गरेका कारण अहिलेको व्यवस्था र कानुनको धज्जी उड्ने गरेको बताएका छन् ।
प्रहरीले खोलामा काठको पुल तर्दै गर्दा एम्बुसमा पारेर घेरा हाली नियन्त्रणमा लिएको र आफुहरुसँग कुनै पनि हतियार नभेटेपछि मात्र बाचेर आएको बताएका छन् । गिरफ्तार परेको बेला पनि फिल्डमा आएको प्रहरीलाई कमाण्ड गर्ने बिस्ट थरका कमाण्डरलाई ह्याण्डसेटमा डिएसपी भाटले हतियार भेटीए सिधै गोली हान केहि पनि फरक पर्दैन भनेर निर्देशन दिएको आफैले सुनेको दाबी समेत गरेका छन् ।
समातेको स्थानमा आफुहरुसँग कुनै पनि हात हतियार नभेटेपछि नजिकैको इलाका प्रहरी चौकीमा लगेर खान तलासी गरेको र त्यहाँ पनि कुनै सामाग्री नभेटेपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा लगेर आफ्ना झोला भित्र लगेर झोलामा गोली र हतियार राखेर राती ९ बजे मात्र आफुहरुलाई देखाएको बताए ।
मुचुल्कामा हात हतियारसहित पक्राउ गरिएको भनेर झुट्टा मुदा बनाएर बेइमान गरेकोले उनीसँग जहिलेपनि टेबलमा बसेर छलफल गर्न सक्ने र तिनका कर्तुतहरुको भण्डाफोर गर्न सक्ने नैतिक पावर आफुहरुसँग रहेको आदर्शले बताएका छन् ।
उनले सरकारी वकिलले समेत प्रहरीको जस्तै झुट्टा बयान दिएर राज्य व्यवस्था र कानुनि निकाय निकम्मा भएको प्रमाणित गरिदिएको बताएका छन् । जिल्लाका सबै सरोकारवाला निकाय, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सेनाका प्रमुख र राजनीतिक दलका प्रमुखहरुसँग पनि आफुहरुले अपराधिक कार्य गर्ने डिएसपी उद्दब सिंह भाटलाई कारवाही हुनुपर्ने माग राख्दै आफुहरुले त्यहाको सबै गतिबिधि प्रष्ट राखिदिएको र सच्याउन अनुरोध गरेर आएको समेत बताएका छन् ।
आफुहरुलाई गिरफ्तार गर्दा महिला प्रहरी बहिनीहरु हुँदाहुँदै पनि साझ-साझ पुरुष प्रहरीले एक-एक गरेर लैजाने कार्य गरेको, त्यो पनि लुकुछिपी हैन खुलमखुल्ला लैजाने अपराधिक काम गरेको भन्दै जिल्लाको नेतृत्व गरेको डिएसपी जस्तो व्यक्तिले दर्जनौ प्रहरी र १६ जनाको आफ्नो टीमका अगाडी महिला बन्दिहरुको छातीमा समातेर लतार्ने, गालामा हिर्काउने, लातिले हान्ने काम भाट आफैले गरेको समेत आरोप आदर्शले लगाएका छन् ।
अझ त्यसलाई नै राष्ट्रपतिले सम्मान गर्नु भएको छ । अनि राज्य नै त्यस्तो भएपछी, व्यवस्था नै त्यस्तो भएपछी, उसलाई नै प्रमोशनको प्रक्रियामा अगाडि बढाएको कागज दिएपछि, के हुन्छ ? उनले प्रश्न गरेका छन् । आदर्शले भनेका छन्- “म चाहि दाङमा गिरफ्तार परे, सुनसरी मलाइ लियो, अनि ५४ सालम पनि म गिरफ्तार परे, त्यतिखेर पनि प्रहरीले त्यस्तो नराम्रो व्यवहार गरेन । तर भाटले गरे, भाटले के भन्थे भने मेरो डिआइजीसँग सम्पर्क हुदैन, मेरो च्यानलमा सम्पर्क हुदैन । सिधै चाही आइजीपीसँग सम्पर्क हुन्छ भन्थे । माथिको निर्देशन हो भने, मैले भने बहिनीहरुलाई त्यसरी समात्ने के माथिकै आदेश छ भन्दा उनि बोल्दैनन् थे, त्यो त एकदम राज्यको नाङ्गै रुप हो, राज्यले त्यस्ता अपराधलाई कन्ट्रोल गर्न सकेन ।”
नेता आदर्शले आफ्ना कार्यकर्तालाई धम्क्याउन, मानसिक यातना दिन, खाल्डा देखाउने, रगत ओकल्ने गरि यातना दिने, करेन्ट लगाउने, बेहोस हुनेगरी कुट्ने, डिएसपिले कुट्दा कुट्दा आफु थाकेर अन्य प्रहरीलाई समेत कुट्न लगाउनेजस्ता अमानविय कार्य गरेको बताएका छन् ।
“प्रहरीको यातनाबाट घाइते भएका आफ्ना साथीहरुको रगत हिरासतमा बसेका अरु साथीहरुले पुछ्नु भएको छ । पानी खुवाउनु भएको छ, म प्रमाणित गर्न सक्छु, यो कही दब्ने कुरा हैन, म अहिले पनि के भन्छु भने उद्दब सिंह भाट र हाम्रोबीचमा छलफल चलाउनुपर्छ । उनले ३ वटा गोली र एउटा कट्टा पेस्तोल कहाँबाट ल्याए ? त्यो पनि चेकजाच हुनुपर्छ । यस्तो पनि हुन्छ व्यवस्था ?” नेता आदर्शले प्रश्न गरे । यस्तै नेता आदर्शले त्यहाँका सबै कुरा आफुले सस्मरणमा पनि लेखेको बताएका छन् । उनले यद्दपी त्यो कुरा उद्दब सिंह भाटको नभएर यो व्यवस्थाको र केपी ओलीको भएको बताएका छन् ।
आदर्शले कार्तिक २४ गते जिल्ला अदालतमा न्यायाधिश माधब प्रसाद घिमिरेले तपाईहरुसँग त केहि पनि भेटिएन, तपाईहरु छुटिहाल्नु हुन्छ होला भनेको तर ६७ दिनपछि फेरी थुनछेक गर्दा उहाँले नै तपाईहरुसँग त कट्टा पेस्तोल भेटियो भनेर झुट्टा मुद्दा लगाउने प्रपन्च रचेको बताएका छन् । त्यसबेला त्यहाँका तल्लो दर्जाका प्रहरी, सेना र जनताले समेत यो डिएसपी त खराब रहेछ भनेर सार्बजनिक रुपमै भनेको समेत आदर्शको दाबी छ ।
अन्तर्वार्ताका क्रममा नेता आदर्शले गाउँपालिकादेखि प्रदेश र केन्द्रसम्मका सबै सचिवहरु र नेता मन्त्रीहरु करप्टेट भएको समेत बताएका छन् । सरकारी कर्मचारी कसैले पनि शिर ठाडो गरेर नेपाली जनताको सेवाको लागि मात्र बसेको हुँ भनेर भन्न नसक्ने अवस्था रहेको उनको भनाई छ । नेपालमा सधै बिदेशीको चलखेल हुने भन्दै आदर्शले अहिले चर्चामा रहेको एमसीसी कुनै पनि हालतमा खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन्।
एमसीसीका बिरुद्ध बोल्नेलाई जेल हाल्न गृहले बिज्ञप्ति जारी गरेको प्रसङ्गमा नेता आदर्शले त्यस बिरुद्ध बोलेबापत आफुलाई गिरफ्तार गरेर देखाउन चुनौती दिएका छन् । एमसीसी प्रकरणमा प्रचण्ड र शेर बहादुर देउवा बिक्री भइसकेकाले त्यस बिरुद्ध बोल्न नसकेको र पास गर्ने लाइनमा रहेको समेत उनको भनाइ छ ।
अन्तर्वार्ताका क्रममा नेता आदर्शले आफुहरु भूमिगत नभएको र राज्यले भूमिगत गराएको बताउदै अहिले राज्य आफैले प्रतिबन्ध फुकुवा गरेका कारण आफ्नो पार्टीले जनतामा आफ्ना कुरा राखिरहेको बताएका छन् । उनले आफुहरुले पार्टी पुनर्गठन गर्दा पनि यो राज्य व्यवस्थालाई अस्विकार गरेको र आज पनि पार्टीको उक्त अडान कायम रहेको बताएका छन् ।
उनले सरकारले नै आफुहरुमाथि प्रतिबन्ध लगाएको, सरकारले नै आफ्ना नेता कार्यकर्ता मारेको बताउदै यसको जिम्मा पनि राज्यले नै लिनुपर्ने बताएका छन् । कही कतै आफ्ना तर्फबाट केही घटना घटेका भए राज्यले दमन गरिसकेपछि त्यसको प्रतिरोध गर्दा मात्र त्यस्तो भएको बताएका छन् । जनताले प्रतिरोध गर्दा त्यसको लिडिङ्ग मात्र आफ्नो पार्टीले गर्ने गरेको समेत उनले बताए ।
उता डिएसपी भाटले भने ति आरोपहरु निराधार र झुटा भएको प्रष्ट्याएका छन् । उनले नेकपाका नेता कार्यकर्ताहरुलाई आफु बाजुरा प्रहरी प्रमुख हुँदा गिरफ्तार गरिएको तर त्यसरी भिडियोमा आरोप लगाइएको जस्तो नभएको बताएका छन् । उनले सञ्चारकेन्द्रसँग छोटो प्रतिक्रिया दिदै ति आरोपहरु व्यक्तिगत आग्रहपूर्वाग्रहमा आधारित भएर लगाइएको बताएका छन् । उनले आफु कर्तब्य पालनाको शिलशिलामा रहदा माथिको आदेश अनुसारको काम मात्र गरेको बताएका छन् ।